Isku-xirka Twitter waa ari suuq-geyn oo hoos loo dhigo ganacsi kasta oo kasta waa inuu ahaadaa. Waxaa la caddeeyey în ay tahay istaraatiijiyad muhiim u ah în la dhiso kalsoonida, kor u qaadida wacyiga brandka, iyo în xoojiyo xidhiidhka dadka dhagaystayaasha ah.
WHSR waxay bilowday adeegeena ishtag ee ‘WHSRnetChat’, bloggerii waxaanay gaarsiisaa kuwa, saameyeyaasha, shakhsiyaadka, sumcada, ururada, iwm. Da, tu ururiyaan ra’yigooda iyo jawaabcelinta mawduucyada la xiriira blogga.
Waxaan bilawnay ololahan doodan Twitter-ka ah ujeedka – si uga caawiyaan akhristeyaasheena inay dhisaan blog wanaagsan.
Aan ku bilowno su’aashayagii ugu orreeyay ee Twitter.
1 #WHSRnetChat Q1. Maxay tahay xayndaabkaaga 1 (i) si aad u soo saarto bloggaaga 2016?
2 #WHSRnetChat Q2. Maxay tahay a spus că aab u tagayso ee maareynta warbaahinta bulshada?
2.4 Ceara Qaar kale
#WHSRnetChat Q1. Maxay tahay xayndaabkaaga 1 (i) si aad u soo saarto bloggaaga 2016?
2016 waxay sii wadaa inay noqoto sanad adag oo loogu talagalay warhadaha blogging. Iyadoo la raacayo tilmaamaha cusub ee Google sida ugu wanaagsan ee loo raadin lahaa baaritaannada, bloggerii ayaa la filayaa in ay shaqo adag ku qabtaan si ay u gaaraan heer sare.
Barta blogku waa în ay diirada saaraan bixinta maadooyin wanaagsan oo wax ku ool ah oo akhristayaasha. Ereyada kale, bloggeri ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay sameeyaan cilmi baaris iyo qoraa dheer oo posts.
– Angie Silver (@SilverSpoonLDN) 19 iunie 2016
– Fugogaraam iyo Muuqaal (@fuggsandfoach) 7 februarie 2016
Waxaan u maleynayaa în joogtayntu marwalba muhiim tahay. Anshax ahaan, diiradda, boostada & warbaahinta bulshada. #bloggingtips # sheygaaga #WHSRnetChat
Ton wuxuu ka soo baxayaa bogagga wuxuuna kugu xirayaa akhristayaasha. Markaad u dhowdahay inaad dhagaystayaashaada ku dhageysato, waxa fiican inaad fahamsan tahay waxa ay raadinayaan iyo waa hab lagu fili karo si aad u korto blogkaaga, erao kale!
#WHSRnetChat Q2. Maxay tahay a spus că aab u tagayso ee maareynta warbaahinta bulshada?
Waa la wada ogyahay într-un Blogger wuxuu leeyahay habdhaqan maalinle ah oo jilicsan.
– Waxaad Ilmahayga Hooyo (@YouBabyMeMummy) 23 Maarso 2016
Hei! Xaqiiqdii waa furfurnaan de Buffer, Tweet Jukebox + Dabiiciga bulshada ??? [@buffer @SproutSocial @alphabetsuccess] #WHSRnetChat ???
Tata Badan ayaa Jira, Buffer, Hootsuite iwm 🙂
– Harleena Singh (@harleenas) 28 mai 2016
Sida aad arki karto, inta badan ka qaybgaleyaasheena waxay kugula talinayaan Buffer, Hootsuite iyo Socialoomph inay yihiin a spus că e adeegsadaan maareynta warbaahinta bulshada.
Waa a spus că weyn marka aad maamusho xisaabaadka badan ee Twitter. Waxaad abuuri kartaa kaydka safka loogu talagalay tweet-kaaga. Waxay kaa caawineysaa in aad jadwalato fariin qoraal ah oo kala duwan mar kasta oo la soo diro.
Qeybta xiisaha lihi aniga ila tahay waxaa jira spunea fara badan oo mudan în xuso. Waxay u badan tahay inaadan haysan waqti ku filan oo aad ku baadho dhammaantood.
Ceara Qaar kale
salut, Waxaan și isticmaalaa Social Oomph iyo Tweetdeck laakiin aalad uma adeegsano Facebook.
– Jasper (@OpportunityTM) 28 mai 2016
– Adrian Jock (@IMTipsNews) 2 aprilie 2016
– Nancy Seeger (@SeegerN) 3 aprilie 2016
Waa a spus că a scris maareyn kartida Twitter si kor loogu qaado ka qaybgalka iyo abuurista raadoyinka imaan kara. Waxaad la socon kartaa dhammaan isdhexgalkaaga muhiimka ah ee beeshaada gudaheeda. Waxa ugu fiicani waa, waxaad sameyn kartaa oo kobcin kartaa ololeyaal kala duwan sida jadwalkaaga gaarka ah.
Waa sahlan tahay în isticmaalo. Kaliya cusbooneysii cusbooneysiintaada maktabada oo samee jadwalka boostada. Edger wuxuu isticmaali doonaa cusbooneysiinta maktabada si uu u abuuro saf. Qaybta ugu fiican waa, waxay "automagic" u buuxin doontaa oo buuxin doontaa lafteeda iyo cusbooneysiinnadaada ma aha inay qashinayaan.
Iyada oo ku xiran tahay nișă, waxaad și maleyn kartaa în shabakadaha aan caadi ahayn în ay gaaraan dhagaystayaashaada.
Ka dhigashada lacagta laga helo blogga had iyo jeer waa mawduucda ugu qatarsan internetka. Marka aad eegto isbedelka raadinta Google, waa mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee waqtiga oo dhan.
Bishii Janaayo 2016, Pat Flynn oo ka socota Dakhliga Dakhliga Gaarka ah 106.492,27 USD. Waxa uu samaynayaa (ku dhawaad) sida ugu yar ee shirkadda yar ee shirkadda liiska.
Da: # 1 Guryaha Shirkadda tooska ah, # 2 Heshiisyada Heshiiska La Wadaago # 3 afiliat Amazon, # 4 Adsense / Media.net.
– Brian Jackson (@brianleejackson) 13 aprilie 2016
– Angel Balichowski (@Angelcbali) 18 aprilie 2016
Adeegsiga baloog si aad u bixiso xalka akhristayaashaada ayaa fueo kale ah hab caan ah oo lacag lagu sameeyo. Waa tan sida aad u sameyn karto
– Zac Johnson (@zacjohnson) 17 aprilie 2016
– Stephanie Clegg (@StephanieFrasco) 14 aprilie 2016
– Brent Jones (@brentjonline) 13 aprilie 2016
Gael Breton oo ka socda Hay’adda Hacker ayaa falanqeeyay sida bloggerilor ay lacag uga helaan barta iyo waxay la yimaadeen qaybaha waaweyn ee 3 halkaasoo lacagta ay ka timaaddo (oo u muuqata mid u muuqata mid sahlan).
Sursa: Hacker Maamulka
Tati badan oo bloggeri ah ayaa lacag badan ku sameeya internetka. Waa la qaban karaa.
Maqaalka la xiriira: Sida loo sameeyo (lacago badan) lacag blog: nișa fikrado, kira daasas, istaraatiijiyada taraafikada
Tani waa WHSR Twitter-ka soo-celinta sheekeysiga #WHSRnetChat. Waxaan rajeynayaa în ay faa’iido kuu tahay.
@sherisaid, @rozkwalker, @michelotta, @ 30ishblogging, @cucumbertown, @ cre8d, @ mousefashion95, @KintsugiOfLife, @aannadobreva, @SalmaDinani, @kevvieguy, @ DeepaliBhatt4, @theresamorone, @Theresamorone, @BeaverBuilderuu , @ thejfoster42, @HoylesFitness, @ ImRose1, @ElleAyEsse, @MikeSMcDonald, @WebpresenceUK, @INNOVEXco, @B_Grimaldi, @shyvish, @mzoptimism, @UwanaWhat, @ikechiawazie, @Minucaeena, @Minucaeena bloghandsseo